3 Ciyaartoy muusig ah oo loogu talagalay shaashadda AMOLED | Androidsis
Fiidiyowgan cusub ee fiidiyowga ah, oo si gaar ah loogu talagalay boosteejooyinka leh shaashado leh tiknoolajiyadda AMOLED iyo SuperAMOLED, in kasta oo ay sidoo kale ansax u tahay nooc kasta oo tiknoolajiyad shaashad ah, taas oo ah, waxay si buuxda ugu shaqeynayaan shaashadda IPS, waxaan kuu soo bandhigayaa 3 ciyaartoy muusig oo si gaar ah loogu talagalay shaashadaha AMOLED.
Kuwani 3 ciyaartoy muusig ee shaashadda AMOLED, sidee macquul u yihiin ku dhammeeya midabyo mugdi ah si loo badbaadiyo nolosha batteriga ugu badan shaashadda noocan ah. Waxaa jira 3 ciyaartoy muusig oo aad u kala duwan kuwaas oo midkasta oo ka mid ahi na tusayo ama soo bandhigayo ikhtiyaar caan ah oo ka dhex jira kuwa kale oo dhan. Marka waxaan ka tegayaa hordhac aan meelna noo horseedayn waxaana ku tusi doonaa 3-daan laacib ee muusikada shaashadda AMOLED, dhammaantood waxaa laga heli karaa bilaash Google Play Store iyadoo waxa kaliya ee ka dhexeeya ay tahay ma lihid nooc xayaysiis ah oo lagu dhex daray barnaamijka.
1 Dhageysiga Musiga
2 Qalad la'aan
Magaca codsigu wuxuu horeyba noogu sheegayaa ficil ahaan wax walba, waana taas Dhageysiga Musiga Waa muusig aad iyo aad u fudud muusig iyo iyada oo aan lahayn ikhtiyaar qaabeyn ah gudahood barnaamijka adeegsigiisa gaarka ah ee adeegsadaha. Xiriiriyaha isticmaalaha ee mawduuca hagista ee na siinaya aasaasiga ah ee codsi muusig ah oo loogu talagalay Android ayaa na siin kara:
Ciyaarta Hada xulasho
Wanaagsan oo cajiib ah oo ku saabsan tan codsi muusig oo si gaar ah loogu talagalay shaashadan oo leh teknolojiyadda AMOLEDWaxaan ka heli karnaa gudaha muusikada muusikada lafteeda ikhtiyaarka ikhtiyaarka muusikada hadda jira.
Isku xirkan oo ah halka naloo soo bandhigayo wadada aan dhegeysaneyno iyo sidoo kale Ciyaar / Hakad, Dib u laabo, badhamada horay loo sii wado iyo Shufle-ka caadiga ah, Dib-u-socoshada joogtada ah iyo badhamada ugu xiisaha badan, ayaa qarineysa ikhtiyaar ah iyadoo kaliya laga leexanayo midig ilaa bidix ama kuxigeen taa beddelkeeda, waxaan geli doonnaa a muujinta nooca barbaraha muuqaalka taas oo aan ku raaxeysan doono lix Maqaar oo aad u kala duwan oo dhexdooda ah oo si buuxda gacanta loogu qaabeyn karo.
Saddex ka mid ah maqaarradan ayaa xitaa noo oggolaanaya inaan ku darno astaan ​​ama sawir aan ku soo bandhigno kuwaan. muuqaal qurux badan oo EQ ah waa maxay Muhiim u ah codsigan taasna way ka duwan tahay kuwa kale in maanta qoraalkan aan kula talinayo. (Fiidiyowga aan kaaga tagay bilowga qoraalkan waxaan si faahfaahsan kuugu tusayaa wax walba oo ku saabsan bandhigyadan garaafka ah iyo sida loo galo qaabeynta qaabeynta mid kasta oo iyaga ka mid ah si madax-bannaan, markaa waxaan si weyn kugula talinayaa inaad fiiriso jaleeco).
Developer: Fantefan Schindler
Uniplayer waa muusig muusig ah oo aan u dhigmaynin boosteejooyinkayada Android, qaasatan hadii aan leenahay terminal leh shaashad leh teknolojiyadda AMOLED oo aan u isticmaalno Maqaarka Maqaarka Kani waa midka arjigu ku dhex leeyahay qaabeynta qaabeynta gudaha.
Nidaamyadan qaabeynta gudahood, marka laga reebo inaad awood u yeelan karto inaad soo bandhigto arrintan ku saabsan isku xirnaanta adeegsadaha gaar ahaan loogu talagalay shaashadda AMOLED oo leh Astaantooda Madow ama Madow, waxay kaloo leedahay ikhtiyaarro ay ku carqaladeyso lahjadda barnaamijka adoo adeegsanaya toddobo mowduuc oo midab leh.
Marka taa laga reebo, UniPlayer wuxuu kaloo hayaa xulashooyinka qaabeynta sida awoodda lagu daro tilmaamo kala duwan u boodboodka kor ama hoos uga eeg muusigga muusigga isla markaana ku jira ikhtiyaarka bandhigga waddada hadda socota. Marka marka aan ku jirno isdhexgalka dib-u-soo-celinta laf-dhabarka laftiisa, midka midka lagu muujinayo jidka hadda socda iyo daboolka dushiisa, tusaale ahaan waxaan u qaabeyn karnaa mari tilmaanta si aad ugu beddesho albumka halka tilmaanta hoos u riixistu ay noo gaynayso is dhexgalka hagaha iyada oo loo marayo qaybaha kala duwan ee arjiga.
Una codsi aad u dhameystiran iyo sidoo kale nal iyo inay ku habboonaan doonto boosteejooyinkaaga shaashadda AMOLED si aad iyo aad u wanaagsan.
NMusic Mini Audio Player Waan ku jeclahay xaqiiqda ah inay tahay muusig muusig aad ufudud u ah Android oo aan awoodi doonno inaan ka helno Google Play Store. Iyada oo kaliya miisaankiisu yahay 320 Kb, NMusic Mini Audio Player wuxuu na siinayaa suurtagalnimada kaliya ee aan ku dhex mari karno faylalka Android-ka si loo abuuro hal keli ah oo lagu daro ama laga saaro walxaha kaliya iyaga oo ka xulanaya galka muusiggeena.
Liiskaas kaliya ee aan u adeegsan karno arjiga, wuxuu noo ogolaanayaa marinka ugu nadiifsan iyada oo loo marayo galka muusikada ee Android-keena, xulasho badan oo heeso ah in lagu daro liiskan, oo leh xulashooyin lagu daro dhexda ama lagu daro dhamaadka liiska.
Waxay tagaysaa iyada oo aan la sheegin in interface user ee arjiga wuxuu ku saleysan yahay midab madow oo saafi ah, taas oo ka dhigaysa shaashadda AMOLED ee istiraatiijiyadayada Androdi inay isticmaalaan batteriga ugu yar ee suurtagalka ah, haddii aan tan ku darno tan yar ama aan u badnayn ilaha ay naga isticmaasho Android, waxaan nahay, sidaan ku sheegay bilowgii qoraalkan, kahor ikhtiyaar aad ufiican oo loogu talagalay qalabka leh nidaamyada nidaamyada yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 3 Ciyaartoyda muusikada ee shaashadaha AMOLED
Samsung Internet Beta, biraawsarka internetka ayaa hadda la heli karaa